Korean Air mba hamboly hazo any Mongolia
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Korean Air mba hamboly hazo any Mongolia
Enga anie 17, 2017
Ny Korean Air no nitarika ny famonjena ny tany tamin'ny alalàn'ny firotsahana an-tsitrapo nandritra ny 14 taona nisesy hamboly hazo tany Mongolia.
Manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 26 Mey, mpiasa mpiasan'ny Air Korea 200 mahery no hiara-hiasa amin'ireo mponina 600 any an-toerana hamboly hazo ao Mongolia. Ity hetsika ity dia ao anatin'ny 'Tetikasa fambolena eran-tany' an'ny Korean Air izay mikendry ny hisorohana ny fanaovana laozana ny tanàna sy hamonjy ny tontolo iainana. Ilay faritra efa nilaozana ankehitriny dia manana hazo 110,000 mahery nambolena ary nantsoina hoe 'Ala an'habakabaka Koreana'. Ny ala dia ao Baganuur, tanàna 150 kilometatra atsinanan'ny Ulaanbaatar, renivohitr'i Mongolia.
Ny 'Korean Air Forest' dia mandrakotra velarantany 440,000 metatra toradroa ary ahitana hazo poplar, buckthorn an-dranomasina ary elifika Siberia ny ankamaroany. Ny voan'ny buckthorn an-dranomasina dia ampiasaina ho zava-pisotro misy zava-pisotro vitamina. Noho izany ny fambolen-kazo dia tsy vitan'ny hoe miha-maitso ny tanàna fa mandray anjara amin'ny fampitomboana ny vola miditra amin'ny mponina eo an-toerana. Ny zotram-piaramanidina dia mifantoka amin'ny fikojakojana tsara ny ala ary nanakarama olona matihanina iray eo an-toerana hikarakara azy io ary hampiofana ny mponina eo an-toerana amin'ny fanaraha-maso.
Ankoatr'izay, ny Korean Air dia nanome fitaovana fanabeazana toy ny solosaina, latabatra ary seza ho an'ireo sekoly eo an-toerana izay mandray anjara amin'ilay zotram-piaramanidina amin'ny asa fambolen-kazo. Noho ny ezaka tsy tapaka nataon'ny Korean Air, ny finiavan'ireo mponina hamonjy ny tontolo iainana dia nitombo tokoa ary lasa mpanohana mafana fo ny asa fambolena fanao isan-taona izy ireo.
Ankoatry ny fambolen-kazo dia nanatontosa fandaharana marobe amin'ny tsena isan-karazany i Korea Air izay manidina hanampiana ireo vondrom-piarahamonina sahirana. Amin'ny fampiasana ny tamba-jotra eran'izao tontolo izao, ny zotram-piaramanidina dia nanome entana fanampiana ho an'ny firenena toa an'i Myanmar, Nepal, Japon ary Peroa rehefa iharan'ny loza voajanahary izy ireo. Korean Air dia hanohy hamoaka programa momba ny andraikitra ara-tsosialy ao amin'ny trano sy any ivelany, ho fanohanana ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fitazonana ny fampandrosoana maharitra ary ny fanohanana ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana.
Ny famolavolana "Private Stowage Compartment" dia mandresy amin'ny fifaninanana Airbus Fly Your Ideas 2017
Manitatra ny maso any Swiss-Belhotel International any India
38 minitra lasa izay